Ukuhlala efama namahashe neegusha - I-Airbnb
Ukuhlala efama namahashe neegusha
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguDominique
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-14 Aga.
Ukuba ujonge indawo yokubaleka, ukuphumla kwindawo ezingqonge ezilalini, ke le yindawo yakho. Sinamagumbi amabini aneembono ezimangalisayo kumgangatho ophezulu wendlu yethu yasefama ukuba yonwabele, kunye nendawo ephezulu enoomatrasi abaninzi. Unokuvuka ubone amahashe edlala, uhambe uhambo kwihlathi elijikelezileyo, okanye uphumle nje kwaye uyonwabele indlu. Ukuba uyawathanda amahashe, ngoku sineemazi ezimbini zeemazi, iimazi ezimbini zeehashe kunye neeponi ezimbini zeshetland esizikhathaleleyo.
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo kakhulu, inamabala avulekileyo kunye nehlathi elikufutshane, emva nje komda ukuya ePoland. Njengomsebenzi okhethekileyo, le ndawo ikwiikhilomitha ezili-16 kuphela ukusuka kumbindi weSzczecin, nto leyo eyenza kube yindawo efanelekileyo yabantu abafuna ukuhlola isixeko.
Jonga kwakhona "Incwadi yesikhokelo yeRamin", uya kuyifumana xa ucofa kumfanekiso weprofayile yam.
Iintsuku eziyi-7 e Ramin
Ngaphesheya komda ukuya ePoland, kumgama oziimitha ezingama-500, kukho imisebenzi emininzi, iimarike zemida, iivenkile ezincinci, ivenkile enkulu kunye nepizzeria. Kwaye ecaleni kwayo kukho ihlathi elicocekileyo elinamachibi nezilwanyana zasendle! Kwicala laseJamani indawo izolile kwaye yasemaphandleni. Kufutshane kukho iindawo zolondolozo ezaziwa ngabathandi beentaka. Ngesicelo sinokunikezela ngokunyuka kwehashe ecaleni komda, ukuze ufumane ngokwenene ukuva okukungqongileyo. Oku kuphela ngabakhweli abadala abanamava.
Uya kuhlala njengeendwendwe endlwini yethu, ngoko ke siya kwabelana ngezinye iindawo zendlu ngexesha lokuhlala kwakho, ngaphandle kokuba ukhetha ukuhlala ngalo lonke ixesha kumgangatho ongaphezulu;) Ukuba unemibuzo malunga nezinto ozenzayo kwindawo ezingqongileyo, siya kukuvuyela ukukunceda. Sithetha isiNgesi, isiJamani, isiPolish, isiDatshi kunye nesiFrentshi.
Uya kuhlala njengeendwendwe endlwini yethu, ngoko ke siya kwabelana ngezinye iindawo zendlu ngexesha lokuhlala kwakho, ngaphandle kokuba ukhetha ukuhlala ngalo lonke ixesha kumgang…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ramin